La soco khadka cusub ee 'Inditex' ee leh 'Zara Beauty' Bezzia
Susana Garcia | | Quruxda, Alaabta quruxda
In kasta oo ay run tahay in Zara horeyba u haysatay xarriiq yar oo la isku qurxiyo oo aan ka heli karno gaar ahaan baruurta, hadda waxaa la bilaabay in la abuuro Zara Beauty, sumad dhan oo ujeedadeedu tahay kordhinta goobtaas. Maaddaama Zara leedahay dhammaan macaamiisha, waxay ku saabsan tahay abuuritaanka khad cusub oo loo dhan yahay oo qof walba isticmaali karo.
Tani cusub Zara Beauty waa fikrad rajo leh oo ka dhex jirta shirkadda Zara kaas oo imaan doona 12-ka May. Waxaa jira dad badan oo ka hadlaya oo aan u maleyneyno in waxyaabaha qaar la iibin doono, marka waa muhiim in laga feejignaado wax kasta oo ay bilaabayaan. Xaqiiqdii waxaa jira wax kabadan hal shey oo naga dhigi doona jacayl.
1 Nadiifi waxyaabaha la isku qurxiyo
2 Faruuqyada Zara Beauty
3 Wajiga Zara Beauty
4 Indhaha Zara Beauty
5 Lacagyada ciddiyaha
Nadiifi waxyaabaha la isku qurxiyo
Waan ognahay in badan oo ka mid ah welwelka hadda jira ee macaamiisha iyo sidaas darteed shirkaduhu waa inay ku xirnaadaan deegaanka oo ay ixtiraamaan marka ay wax soo saarayaan. Ku Zara firm waxay horey uhaysatay dhar lagu sameeyay alaabada dib loo warshadeeyay, laakiin hadda wuxuu rabaa inuu ku qabto aragtidan sidoo kale xariiqda quruxda leh is qurxin nadiif ah oo dhalisa qashinka ugu yar ee suurtogalka ah iyo sidoo kale aan lagu tijaabin xayawaanka. Qurxinta vegan waxay bixisaa faa iidooyin cad marka ay timaado daryeelka deegaanka laakiin sidoo kale caafimaadkeena, taasoo ka dhigeysa hormar weyn adduunka quruxda.
Khadka Zara wuxuu leeyahay wax soo saar yar, maxaa yeelay wali waxay ku qasban yihiin inay ka shaqeeyaan qaaciidooyinka waxyaabaha sida aasaaska ama mascara, oo leh hawl aad u dhib badan. Laakiin iyagu si walba ayaynu nahay alaab ku siinta qiimo wanaagsan, oo leh midabyo kala duwan iyo qaaciddo lagu ixtiraamo deegaanka.
Faruuqyada Zara Beauty
Qaybta bishimaha lagu xardho waxaan ku lahaan doonnaa tiro soo jeedinno ah, gaar ahaan dhanka hooska. Ku baararka stiletto waxay ka kooban yihiin toban midab. Faruuryaha buskudka leh codadka matte waxaan ka helaynaa illaa afar iyo toban cod oo aan kala dooran karno. Waxay sidoo kale sii daayeen qaar ka mid ah bishimaha dhaldhalaalka dhalaalaya.
Wajiga Zara Beauty
Mid ka mid ah riwaayadaha waaweyn ee khadka quruxda Zara ayaa ah inay ku darayso alaabada qaar wajiga. Waxaan heli doonnaa budo naxaas ah, waa lagama maarmaan in la arko midba midka kale midab wanaagsan sanadka oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale bilaabaan gogol-xaarisyo loogu talagalay wejiga leh hooska si ay u iftiimiyaan ama u siiyaan guduud Waxay yihiin qaaciidooyin budo ah oo aan si fudud ugu qaadi karno meel kasta oo ay ugu wacan tahay baakadaha. Dhanka kale, Zara Beauty waxaan sidoo kale ka heli doonnaa buraash aad u badan oo lagu marsado alaabtan.
Indhaha Zara Beauty
Mid kale oo ka mid ah riwaayadihiisa waaweyn ayaa ah wax soo saarka indhaha. Xaaladdan oo kale waan arki doonaa palettes ilaa lix midab oo leh iskudhafyo kala duwan. Haddii aynaan rabin midab aad u tiro badan, waxay na siinayaan dhowr jaalle oo midabbo leh. Dhinaca kale, waxaad leedahay ugub ah afar midab oo si fudud loo mariyo, kareem. Midabada aad ayey u kala duwan yihiin, iyadoo qaar ka mid ah codadka dhiiranaanta leh iyo kuwa kale oo aad u heer sare ah, loogu talagalay dhammaan noocyada maqaarka iyo dhammaan noocyada dhadhanka.
Quruxda 'Zara Beauty' waxay sidoo kale ka fekereen ciddiyahayaga, iyagoo wata aruurinta weyn ee naga keeni doonta midabada qaawan ilaa fasallada waaweyn sida casaanka ama midabbo ka sii adag sida cagaaran ama buluug Wadar dhan 38 midab ayaa dhameystiraya palette ee lacquers-yada ciddiyaha taas oo la soo bandhigi doono 12-ka bishan. Waxaan hubaal ku dhamaaneynaa inaan iibsano qaar ka mid ah, maadaama qiimaha kala duwan sidoo kale uu yahay mid aad u macquul ah. Haddii aan ku darno tan inay yihiin alaabooyin la abuuray oo raadinaya waxyaabaha ugu ixtiraamka badan leh baakadaha sidoo kale dib loo cusboonaysiin karo, waxaan haysannaa ururinta ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Inditex waxay soo bandhigtay Zara Beauty, oo ah nooca quruxda cusub ee Zara
Bariis maraq leh zucchini iyo boqoshaada